Al-Shabaab oo ku jeesatay dadka Xamar
Kadib markii ay ku curyaamiyeen ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo kuwa huwanta magaalooyinka kooban ee ku sii harsan gacanta al-Shabaab ee dalka, ayay dagaalyahannada kooxdu maciinsadeen in ay weerarro miisaan hooseeya ay ku beegsadaan rayidka Muqdisho.
Dhawaantan, ayay al-Shabaab sheegatay mas’uuliyadda weerarro loo adeegsaday gaari bam lagu soo xiray oo ka dhacay bannaanka laba makhaayadood oo lagu qaxweeyo oo ku yaal caasimadda, iyada oo sheegtay in bar-tilmaameedka ay u qasadday uu ahaa xubno ka tirsan adeegyada nabad-sugidda Soomaaliya, sida ay sheegtay mareegta taageersan al-Shabaab ee Calamada 15-kii October.
“Labada qaraxba waxaa ku dhintay dad Soomaaliyeed oo qiimo bulshada ku dhex lahaa, waxaasna maka suurrtawdo cid ay Soomaalinimo ku dambayso,” ayay tiriguddoomiyaha Ururka Haweenka Benaadir Jawaahir Baarqab.
Inkasta oo ay Jawaahir sheegtay in ay ka murugootay weerarrada, haddana waxay sheegtay in tabaha al-Shabaab ay muujinayaan quusta ay ka taagan tahay khasaaraha culus ee lagu markaday.
Kadib markii ay la jahawareertay in ay u babac-dhigto askarta Soomaaliya iyo kuwa Hawlgalka Midawga Afrika (AMISOM), ayay al-Shabaab waxay dib u bilawday weerarradii ay ku haysay dadweynaha, ayay sheegtay, iyada oo sii raacisay in dadkii halkaa ku dhintay ay ku jireen dad da’yar, dhakhaatiir iyo aqoonyahanno.
“Tani waxa ay muujinaysaa naflacaarinimda al-Shabaab,” ayay Jawaahir tiri. “Maxaa yeelay, waxa ay calaamad u tahay guul-darrooyinka so gaaray xagjiriinta maadaama ay rayidka ku soo laabteen mar kale.”
Si kasta oo ay weerarrada ugu sii hayaan dadweynaha, ayay tiri, weerarradu marna ma waabin doonaan dadaallada ay xukuumaddu ugu jirto dib-u-dhiska Soomaaliya iyo sidoo kale taageerada ay dadweynuhu u hayaan dadaalladaas.
“Tani horumarka iyo guulaha dawladda, waxba kama badalayso. Waxaan soo marnay qaraxyo iyo dhacdooyin kuwan ka xanuun badan, qarax kastana qof ama dad badan oo qaali ah ayaan ku waynay” ayay tiri. “Laakiin hawshan soo celinta nabadda iyo horumarka Soomaaliya, wali uma istaagin qarax, haddana ma istaagayso.”
Al-Shabaab waxay in dhawaalaba ka wadday Muqdisho weerarro ay uga aargoosanayso dadka gobalka Benaadir oo u babac-dhigay kooxda sannadihii ugu dambeeyay, ayay tiri Jawaahir.
“Dagaal guud ayay al-Shabaab kula jiraan Soomaaliya, gaar ahaan caasimadda,” ayay tiri.
“Haddaannu nahay dadka Benaadir, waxaan nahay kuwii xaqiijiyay in al-Shabaab aanay waxba eheen oo lala dagaalami karo,” ayay tiri. “Waxan kusii dhawaanaynaa cirib-tirkooda, waxaa iman doonta maalin muwaadinka Soomaaliyeed uu cabsi la’aan ku noolaado Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya.”
Dilka aan loo meel-dayin ee al-ShabaabFaadumo Cabdi Warsame, agaasimaah Ururka Dhallinyarada Qaranka Soomaaliya, ayaa sheegtay in al-Shabaab ayan hadda weerarradeeda ku koobin bar-tilmaameedyada dawladda sababta oo ah waxay si gaar ah uga cabsi qabtaa dadka waxbartay ee dalka.
“Waxa keenaya in ay meelaha dadka rayidka ah qarxiyaan, gaar ahaan makhaayadaha sar sare, waa laba arimood,” ayay tiri. “Tan hore, waxay doonayaan in ay ka takhallusaan qof walba oo leh aqoon uu uga hor imaan karo fikirkooda khaladan. Tan labaad, oo ah iyaga maalmihii ugu dambeeyay ku guulaysan waayay in ay weeraraan goobaha iyo xarumaha dowladda sidii ay horeyba u sameyn jireen.”
“Al-Shabaab waxa ay ka soo horjeedaan in qof Soomaali ah uu nabad ku noolaado, nabad ku soo tooso nabadna ku seexdo,” ayay raacisay. “Ujeedadoodu ugu weyn waa tirtiridda umadda Soomaaliyeed iyo taariikhdooda.”
Faadumo ayaa ugu baaqday dhallinyarada Soomaaliyeed in ay la shaqeeyaan ciidanka dawladda iyo hay’adaha u xil-saaran amniga qaranka si loo tirtiro al-Shabaab.
Dhiniciisa, ayuu Madaxweynaha Jamaacadda Ummadda Soomaaliyeed Yaxmye Cali Ibraahim waxa uu sheegay in fashilka al-Shabaab ee ay ku kala saari wayday dadweynaa guud iyo kuwa ay u aragto cadowga laga dhaxlay dhimashada dad badan oo rayid ah.
“Horta dadka ay al-Shabaab cadawga u arkaan — madaxda iyo saraakiisha dowladda — iyo dadka caadiga ee shacabka ka ah Muqdisho waa dad isku milan oo aan kala maarmayn,” ayuu yiri. “Marka, al-Shabaab iyaga oo daba jooga hal ama laba qof oo dowladda ka tirsan ayay waxa ay galaafanayaan tobonaan aan waxba ka galabsan noloshooda.”
“Al-Shabaab hadda ma awoodaan in ay sameeyaan qaraxyadii isku dhow dhowaa iyo weeraradii tooska ahaa ee ay caanka ku ahaayeen, marka waxa ay samaynayaan wax walba oo ay wali isugu muujin karaan in ay awood jirta yihiin, shacab ama dawlad cidday doontaba haku wax yeelowdee,” ayuu yiri.
Si kastaba ha ahaatee, Xuseen waxa uu sheegay in in sirdoonka dowladda uu yaryahay kahortaggooda weerarada noocan oo kale ah.
Sirdoonka waxaa laga rabaa in ay ogaadaan meelaha laga soo maleego weerarada qaraxyada ah iyo cidda rasmi ahaan soo diyaarisa, ayuu sheegay. “Waxaa laga rabaa in ay ogaadaan xaafad walba oo caasimadda ka tirsan iyo cidda maalin walba ku soo kororta.”
Taa baddalkeeda, saraakiisha sirdoonka waxay inta badan sameeyaan isla waxay ay ka shaqeeyaan askarta bilayska halkii ay ku shaqayn lahaayeen dharcadnimo si ay xog ugu soo aruuriyaan isla markaana u burburiyaan unugyada al-Shabaab, ayuu sheegay.
“Haddii caasimadda ammaankeeda si rasmi ah loo xaqiijiyana, dalka intiisa kale wuu iska hagaagayaa,” ayuu raaciyay.
AKHRISO WARBIXINTAAN:- KHILAAF SOO JIREEN NOQDAY
Xog: Wararkii Ugu Dambeeyay Halka uu Marayo Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha
Waxaa wali sii xoogeesanaya Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha Soomaaliya Xaan Sheekh Maxamuud iyo R/Waaare Cabdi Wali Sheekh Axmed , Khilaafka labada Masuul ayaa soo banaan baxay markii R/Wasaaraha uu isku shaandheyn kooban ku sameeyay Qaar kamid ah Xubnaha Golaha Wasiirada.
Xafiisyada Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha waxaa saacadihii lasoo dhaafay ka socday kulamo xasaasi ah oo labada Masuul ay la qaadanayeen Wasiirada iyo Xildhibaanada ku fikirka ah , waxa ayna labada dhinac wadaan dagaal Siyaasadeed aad u xoogan.
Sida aan Wararka ku heleyno inta badan Golaha Wasiirada Xukuumada Soomaaliya ayaa la safan R/Wasaaraha , waxaa sidoo kale jira Wasiiro iyana taageersan Madaxweynaha Soomaaliya kuwaa oo u badan kuwa kasoo jeeda Ururka Dam Jadiid iyo kuwa ku fikir ah.
Wasiiradii uu dhawaan isku shaandheynta ku sameeyay R/Wasaaraha ayaa wali shaqadooda si caadi ah usii wata, waxa ayna u hogaansameen Wasiiradan amarka Madaxweynaha Soomaaliya oo ku aadanaa in wasiir kasta uu xafiiskiisii hore u shaqo tago.
Xildhibaano katirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyagana mashquul ka dhigay Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya , Xildhibaanada ayaana qaarkood dabka kusii shidaya Khilaafka ka dhax curtay madaxweynaha iyo R/Wasaaraha.
Waxaa fashil kusoo dhamaaday dadaalo ay wadeen Xubno katirsan Beesha Caalamka iyo Masuuliyiin kale oo katirsan Dowlada, kuwaa oo doonayay in la damiyo xiisada Siyaasadeed ee soo korortay iyo in la qaboojiyo Khilaafka sii xoogeesanaya ee u dhaxeeya Madaxweynaha iyo R/Wasaaraha.
Dadka Siyaasada falanqeeya ayaa iyagu aaminsan in ay dhamaatay Kalsoonidii wada shaqeynta ee ka dhaxeysay Madaxweynaha Soomaaliya iyo R/Wasaaraha, waxa ayna tilmaamayaan in xalka ku jiro in midkood meesha ka baxo .
Xog: Maxaa kasoo baxay kulan Kay uu la yeeshay R/W Cabdi Weli iyo Faarax
Wakiilka Qaramada Midoobey ee arrimaha Somalia, danjire Nicholas Kay, ayaa la sheegay inuu kullan gaar ah la qaatay ra’iisul wasaare Cabdi Weli iyo Faarax C/qaadir.
Wararku waxa ay sheegayaan in Nicholas Kay oo kulamo gaar gaar ahaa la qaatay Labadaasi mas’uul, balse uu ku guul darreystay in mid waliba uu ka dhaadhacsiiyo in xalinta Khilaafka u dhexeeya Xasan iyo C/Weli uu ku xiran yahay inay heshiiyaan labadooda.
Kulanka uu Nicholas Kay la qaatay C/Weli iyo Faarax ayaa noqday mid aan miro dhal laheyn kadib markii Ra’isul wasaare C/Weli ku adkeystay in xilli walba uu cuskan doono dastuurka, islamarkaana uusan wax iska badeli doonin go’aankiisa isku shaandheynta, halka Faarax C/Qaadir uu isna ka biyo diiday inuu tanaasulo.
Intaa kadib ayaa waxaa la sheegayaa in Nicholas Kay uu qaatay go’aan islamarkaana uu labada mas’uul ku wargaliyay inuu ficilladooda ay keeni karaan in caalamka taageerada kala laabto dowladda federaalka ah ee Soomaaliya.
Kay ayaa ku goodiyay in Beesha caalamka uu u gudbinaayo xaqiiqda dhabta ah ee ka taagan Villa Somalia iyo in dalka uu ka xasili la’ yahay Xasan, Cabdi Weli iyo Faarax.
Xogta qaar ayaa sheegeysa in Nicholas Kay uu Ra’isul wasaare C/Weli iyo Faarax C/Qaadir ugu baaqay inay iska casilaan xilka ka hor inta aan laga soo saarin amar adag, balse wararkaas lama xaqiijin karo.
Lama oga sida uu xaalku noqon doono, waxa uuna khilaafka Xasan iyo Cabdi Weli xiligaani jahwareer ku riday Nicholas Kay iyo xubno ka tirsan QM oo qeyb ka ah shaqsiyaadka ku guda jira xalinta khilaafka.
Lacagtii lagu ridi lahaa R/W Cabdi Weli oo gaartay Muqdisho (Xagee ka timid?)
Ilo wareedyo ka tirsan Xafiiska Madaxweyne Xasan Sheekh, oo codsaday inaan la magacaabin, ayaa Jornalizem u sheegay in madaxweynaha iyo kooxdiisa ay haystaan lacag ku filan, oo ay ku ridi karaan Cabdi Weli Sheekh Axmed.
Waxa ay ilo-wareedyadan sheegayaan in lacagtaas ay dowladda Sacuudiga ugu deeqday madaxweynaha, intii uu dalkaas joogo waqtigii xajka.
Ilo-wareedka ayaa sheegaya in lacagta ay dhan tahay 20-milyan oo dollar, inkasta oo dhammaanteed lacagtaas aan loo adeegsan doonin riditaanka Cabdi Weli.
Lacagta oo madaxweynaha loo yaboohay waqtigii uu joogay Sacuudiga, ayaa waxaa dhowaan soo qaaday nin lagu magacaabo Fahad Yaasiin, oo ka mid ah xubnaha sare ee Damu-Jadiid, ahaana ninkii dowladda Qadar kasoo qaaday lacagtii lagu doortay Xasan Sheekh.
Fahad Yaasiin, waxa uu ahaan jiray wakiilka TV-ga Aljazeera ee Muqdisho.
Sidoo kale, Ilo-wareedka ayaa sheegaya in lacagtaani ay magaalada Muqdisho gaartay taariikhda marka ay aheyd 27-ka october, iyadoona Ujeedkeeda lagu sheegay in lagu howl galinaayo Xildhibaanada wada mowshinka ka dhanka ah Cabdi Weli.
Dhanka kale, waxaa habeenimadii xalay kullan aan caadi aheyn ka dhacay Villa Somalia kaasi oo u dhexeeyay Culimada iyo Saraakiisha Dam-Jadiid, oo dadaallo xoogan wada, si loo rido Cabdi Weli.
Xasan Sheekh oo taageerada BEELAHA Hawiye ku lumiyey shan sabab dartood
Khilaafka Xasan Sheekh iyo Cabdi Weli, ayey u badan tahay inuu gaaro baarlamanka, halkaasna lagu kala saaro labada dhinac, maadaama ay sheekadu noqotay mindi mindi ku taag.
Mar haddii sheekadi sidaas noqoto, waxa aa lagu xisaabtami doonaan codadka xildhibaanada, waxaana qeyb weyn ka ah codadka xildhibaanada kasoo kala jeeda labada beelood ee labada nin ee Hawiye iyo Daaroood.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli wuxuu taageero weyn ka heystaa beesha uu ka dhashay ee Daarood gaar ahaan Mareexaan, Ogaden, Dhulbahante iyo Majeerteen, hase yeeshee Madaxweyne Xasan wuxuu kalsooni ka heystaa xulufadiisa Damujadiid.
Madaxweyne Xasan Xasan Sheekh wuxuu lumiyay kalsoonida beesha uu ka dhashay ee Hawiye, kadib markii uu ansixiyay qodobo ay Xeeldheerayaasha Hawiye ku tilmaameen ducfi iyo doqonimo.
Waxyaabaha uu Xasan Sheekh ku waayay taageerada beeshiisa waxaa ugu weyn:-
1- Heshiiskii lagu saxiixay Addis Ababa ee goboladda Jubooyinka loogu saxiixay Axmed Madoobe taas oo ka dhigan inuu xaqiray awood qeybsiga beesha Hawiye ee goboladaas.
2- Heshiiskii uu saxiixay ee gobolka Shabeeladda Hoose loogu xalaaleeyay Maamul ka dhisan Baydhabo , taas oo beelweynta Hawiye la yaab ku noqotay.
3- Heshiiskii uu taageeray ee Ra’iisul Wasaare Cabdiwali la saxiixday Puntland, kaas oo dhigaya inaysan Waqooyiga Mudug ka mid noqon doonin maamulka gobolada dhexe.
4- Madaxweynaha oo aqbalay in dhaqaalaha gobolka Banaadir loo siiyo mushaar shaqaalaha Dowladda ee kasoo shaqo tagay gobollada kale ee dalka, iyadoo dhinaca kalena uu aqbalay in Xabsiga loo taxaabo dhamaan Siyaasiyiinta beesha Hawiye, ganacsatada iyo Wariyeyaasha madaxabanaan.
5- Madaxweynaha oo qeybaha beelweynta Hawiye ka diiday inuu ka laabto ololahii xilka tuurista Ra’iisul Wasaare Saacid , maadama ay guriga Ra’iisul Wasaaraha hooyo ka tahay Caasha Xaaji Cilmi oo la ogyahay miisaanka ay beesha Hawiye iyo Soomaalida ku dhex leedahay.
Si kastaba ha ahaatee, Waxaa Muqdisho looga shaahayaa “TOLKAADA WAA FAARAX”
Xog: C/Weli iyo xildhibaanada Daarood oo isla meel dhiggay saddex QORSHE
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdi Weli Sheekh Axmed, ayaa waxa uu kulamo aan caadi aheyn xafiiskiisa kula qaatay Xildhibaanada iyo Siyaasiyiinta kasoo Jeeda Beesha Daarood.
Ilo-wareedyo ka tirsan xafiiska ayaa Jornalizem u sheegay in Kacdoonka Siyaasadeed ee u dhexeeya Xasan iyo C/Weli ay qeyb ka noqdeen Xildhibaanada, Siyaasiyiinta iyo Odayaasha Beesha Daarood, oo doonaya in Cabdi Weli aan looga adkaan codka baarlamanka.
Taasi waxaa sii dheer, in xildhibaanada beelaha Daarooday ayagana si gaar ah u wadaan mooshin ka dhan ah Xasan Sheekh oo lagu jebinayo midka ay wadaan kooxdiisa.
Dhanka kale, warar hoose ayaa sheegaya in Madaxweynaha Maamulka Puntland C/Weli Gaas uu Siyaasad iyo dhaqaale ahaan ka qeyb qaadanaayo Mooshinada looga soo horjeedo Xasan Sheekh.
Cakaaro Action GROUP iyo Faroole oo la hadlay C/WELI, una yaboohay lacag
Guddoomiyaha Cakaaro Action Group Cabdulaahi Salaad Dude iyo Madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole ayaa waxa ay khadka Taleefoonka kula hadleen Raiisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdi Wali Sheekh Axmed.
Ururka Cakaaro Action Group, ayaa ka mid ah ururada qabiileysan ee kasoo horjeeda ama dagaalka siyaasadeed kula jira beelaha Hawiye.
Gudoomiyaha CAG iyo Faroole waxa ay u balan qaadeen lacag gaareysa hal milyan iyo sadex boqol oo kun ayna u soo shubi doonaan ayaamaha soo socda, si uu ugu laaluusho xildhibaanada.
Sida ay xog cusub sheegeyso, Faroole ayaa aad u soo dhaweeyey dagaalka Ra’iisul Wasaaraha uu kula jiro Madaxweynaha Soomaaliya, halka Gudoomiye Cabdulaahi Salaad uu halkaas uga balan qaaday in taalo uu garoowe ururkiisa ugu dhisi doonaan hadii uu dhaqan galiyo heshiiskii ay Garoowe kula soo galeen Puntland, oo laga cabsi qabo inuu burburo, haddii Cabdi Weli xilka laga qaado.
Cabdi Wali ayaa aad uga cawday siyaasiin beesha Daarood ah oo ugu horeeyo wasiirka maaliyada Xuseen Cabdi Xalane iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Xoosha Jabriil, oo labadooda uu ku tilmaamay niman kasoo horjeeda hadafka beesha Daarood, waxa uuna si khaas ah uga codsaday in laga shaqeeyo sidii loosoo dabi lahaa ragaas iyo kuwo kale oo aan la magacaabin, oo la safan madaxweynaha.
Faroole ayaa waxa uu ku booriyey gudoomiyaha ururka Cakaaro Action Group (CAG) Cabdullaahi Salaad Dude inuu soo xero galiyo Xildhibaan Xoosh oo ay iski beel kasoo wada jeedaan, halka Faroole uu balan qaaday in meeshuu doono ha u maree uu soo xero galin doono Wasiir Xalane.
Cabdulaahi Salaad ayaa xilal badan kasoo qabtay dowladdii kali-taliska ahayd ee Afweyne waxaana kamid ahaa jagooyinkaas Duqii Muqdisho.
Gudoomiye Cabdullaahi Salaad Dude ayaa waxa uu soo abaabulay Mudaharaad Madaxweyne Xasan looga soo Horjeeday oo Ohio ka dhacay Bishii Sabteembar 2013
R/W C/WELI oo la shiray beeshiisa una bandhigay 7 arrin oo uu ka cabanayo
Kullan xasaasi ahaa oo u dhexeeyay Ra’isul wasaaraha dalka C/Weli Sheekh Axmed iyo odayaal iyo xildhibaanno ka tirsan Beeshiisa, ayaa ka dhacay Muqdisho.
Kullanka ayaa waxa uu ahaa mid salka ku hayay xal ka gaarista Khilaafka u dhexeeya Madaxweyne Xasan iyo Ra’isul wasaare C/Weli, sida xubno ka qeyb galay kullanka oo codsaday inaan la magacaabin ay u sheegeen Jornalizem.
Ra’iisul wasaare C/Weli ayaa xubnihii uu la shiray waxa uu gaarsiiyay inay jiraan arrimo dhowr ah oo isaga lala maaganaa, balse uu sameeyay difaac waxaana kamid ahaa waxyaabaha uu tabanaayo:-
1 – In Madaxweyne Xasan uu ku howlanaa Mowshin lagu tuuraayo isaga.
2 – In laga lasii koobayey dhaqdhaaaqyadiisa iyo saameynta uu ku lee yahay DF.
3 – In laga qaaday gaadiidka dagaal, oo dowladda ay lahayd, taasi naftiisa helis ku ah.
4 – In marka hore la tashiyo la’aanta ay ka imaaday dhanka Madaxweyne Xasan, oo wax walba kala tashta kooxdiisa Damu-Jadiid.
5 – Warqado dacwad ah oo laga gudbiyay isagoo howshiisa gudanayo, loona diray caalamka.
6 – In Xasan Sheekh uu isku dayay inuu safarada dibada ah ka joojiyo
7 – inuu aaminsan yahay in weerarkii Villa Somalia, isaga loo qorsheeyey.
Odayaasha ayaa lagu wadaa inay kullan la qaadan doonaan Madaxweyne Xasan, una gudbiyaan cabashada ra’iisul wasaaraha, six al loo helo.
Cabdi Weli oo raba inuu xilka ka qaado taliyihii uu khilaafka ka soo billowday
Ra’iisul Wasaare oo Cabdi Weli Sheikh, ayaa magacaabay Taliyaha Ciidanka Booliiska Soomaaliya General Maxamed Xasan. Iyadoo magacaabistaasi shaki ku jiray sharcinimadeeda xaga dastuurka ayuu Madaxweyne Xasan Sheikh aqbalay Xil ka qaadis Taliyayaal ciidan iyo Magacaabis uu sameeyay Cabdi Weli.
Ra’iisul Wasaaraha ayaa iminka la sheegayaa inuu doonayo inuu xilka ka qaado Taliyaha ciidanka Booliiska Soomaaliya Gen. Maxamed Xasan, kadib Markii Taliyaha Ciidanka Booliiska uu xiriir dhow la yeeshay Madaxweynaha Soomaaliya oo ah Taliyaha Ciidamada qalabka sida ee dalka Soomaaliya oo dhamaan taliyayaasha ciidamadu hoos imaanayaan sida kala danbeynta ciidamada iyo shuruucda dalka sheegayso.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh iyo Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ayaa la sheegayaa inuu khilaafkoodu soo bilaawday maalmo kadib markii madaxweynuhu magacaabay R/W Cabdiweli. Khilaafka ayaa koowdiiba ka bilaawday xubnaha loo magacaabayo golaha wasiirada, madaxweynaha ayaa doonayey in xubnaha golaha wasiiradu noqdaan xubno siyaasad ahaan ku dhow dhow, halka Ra’iisul Wasaaruhuna doonayey xubno siyaasad ahaan isaga ku dhow oo la saaxiib ah inuu u magacaabo golihiisa wasiirada, arintaas oo uu Ra’iisul Wasaare Cabdiweli ku guuleystay.
Madaxweyne Xasan Sheikh ayaa golaha wasiirada ee uu magacaabay Cabdi Weli ku lahaa shaqsiyaad aad u yar oo ay kamid yihiin Faarax C/qaadir iyo Cabdikariin. Wasiirka Amniga Cabdikariin ayaa la sheegayaa inuu isu casilay culeys siyaasadeed uu daaha gadaashiisa ka riixayey R/W Cabdiweli. Sidoo kale Wasiirka Garsoorka Faarax ayaa culeys siyaasadeed badan uu heystay ilaa xiligii uusoo galay Golaha wasiirada.
Madaxweyne Xasan iyo R/W Cabdi Weli ayaa khilaafkoodu bilaawday maalmihii ugu horeeyay kadib markii Cabdi Weli uu codka kalsoonida ka helay golaha Baarlamaanka, isaga oo markaa cagta ku dhuftay heshiisyo aan sharciga ku saleysneyn oo ay madaxweynaha wada galeen.
Khilaafka Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa la sheegayaa inuu sal u yahay Dastuurka Federaalka Soomaaliya oo awoodo isla mid ah siinaya Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha. Dastuurka ayaa u qoran qaab u muuqanaya in Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya awoodahoodu aysan kala cadeyn, markasta oo ay isqabtaana ay arrintu noqoto in loola laabto Beesha Caalamka.
Maadaama dastuurka dalka uusan cadeyneynin si waadax ah Mas’uulka ugu sareeya Dawladda Somaliya oo leh go’aanka ugu danbeeya ee dalka ama qofka uu noqonayo mas’uulka ugu sareeya ee Soomaaliya u metelaya caalamka ama qaabilaya madaxda caalamka ee Soomaaliya timaado, taasoo aad ka arki kartaan shirarka caalamka marna inuu Tago madaxweynaha marna inuu tago Ra’iisul Wasaaraha. Sidoo kalana Madaxda caalamka ee booqashada ku timaada Soomaaliya ay laba meel ku kala qaabilaan Madaxweynaha Soomaaliya iyo sidoo kale Ra’iisul Wasaaraha. Labada Mas’uul ayaa caalamka ula hadla mid kasta inuu yahay Masuulka ugu sareeya Soomaaliya oo isagu go’aanka leh.
Arimaha noocaan ah oo mudo badan dhacayey, waji gabaxna ku ah qaranimada Soomaaliya ayuusan hogaanka Baarlamaanka Soomaaliya iyo xubnaha baarlamaankuba isku dayin inay saxaan.
Gudoomiayaha Baarlamaanka Jawaari iyo Ku xigeenadiisa mid ka mid ah Xildhibaan Mahad Cawad ayaa la sheegayaa inay la kala safan yihiin Madaxweynaha iyo Raisul wasaaraha, iyada oo masuuliyiintaani midba kan uu ku xiran yahay u sheego inuu isagu yahay mas’uulka ugu sareeya dalka.
TOP NEWS:- Kay oo ku wareersan Villa Soomaaliya iyo qorshe uu damacsanyahay
Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya oo ay ka mid yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh, RW Cabdi Weli, Jawaari, iyo beesha caalamka oo uu hogaamiyo wakiilka UNSOM Somalia Nicholas Kay ayaa shacabka Soomaaliya iyo caalmaka-ba u sheega in dalka Soomaaliya laga hergelinayo nidaam maamulo Federaal ah, hanaanka xisbiyo, sanadka 2016-dana dalka ka dhacayso doorasho qof iyo cod ah.
Arrintaan oo wakiilka UNSOM Somalia Nicholas Kay iyo Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya ka mideysan yihiin inay u sheegaan dalalka Caalamka iyo Shacabka Soomaaliya ayaa lagu tilmaami karaa BEENTA QARNIGA & MARIN HABAABINTII ugu xumeyd ee lagu sameynayo Qaranimada Soomaaliya.
Maxaa loo baahan yahay si Doorasho xor iyo xalaal ah u dhacdo 2016 iyo in la helo Nidaam Federal ah oo Nabad horseeda:-
• Dastuur Federaal ah oo kala cadeynaya Awoodaha iyo Masuuliyadaha Dawladda Federaalka iyo Maamul Goboleedyada. Dastuur ay ku cadahay qaabka Dawladda Federaalku u shaqeynayso, sida masuuliyiinteeda lagu soo dooranayo, Qaabka Maamul goboleedyadu u shaqeynayaan, noocyada masuuliyiinta ay yeelanayaan, sida loo dooranayo, Qaabka xisbiyadu ku samaysmayaan, Xiliga doorashooyinku dhacayaan, heer Dawladda dhexe, Heerka Maamul goboleedyada, Guddiga Doorashooyinka ee maamulaya doorashooyinka heerarka kala duwan ah, sida guddigu ku sameysmayo. Dastuurka Dalku mid ahaado oo ay ku cad yihiin wax kasta oo quseynaya DF Soomaaliya iyo Maamul Goboleedyada.
• Amniga Dalka oo ay tahay inuu DF Soomaaliya gacanta ugu jiro hadii ay tahay milateri, Booliis, Nabadsugid, Dalka laga sameeyo Tirakoob dadweyne, Dadka Soomaaliya oo qaangaarka ah oo qaata Aqoonsi ay ku codeeyaan, Tirakoobka dalka oo lagu saleeyo Kuraasta Gobolada iyo Degmoyinka kala yeelanayaan, Deegaan kasta oo xubin baarlamaan laga dooranayo loo sameeyo xuduud la yaqaan, hadii ay tahay hal magaalo gudaheed, kursi kasta oo baarlamaan xuduud loo sameeyo in dadka deegaankaas degan meelo ay ka codeeyaan oo laga sii register gareeyo la sameeyo.
• Dastuur Federaal ah oo ay ku cadahay Nidaamka dhaqaalaha Dalka, Bank-ga dhexe ee Soomaaliya hagayo nidaamka dhaqaalaha dalka, Canshuurta Dawladda Dhexe qaadeyso oo ay masuulka ka tahay, canshuurta Maamulada Goboladu qaadayaan, Canshuurta Dawladda Dhexe inta DF maamuleyso iyo inta Gobolada la gelinayo %, Kheyraadka Dabiiciga Dalka oo la sameeyo shuruuc ay ku cadahay in Dawladda Dhexe Maamulayso meeqa %, Gobolada kheyraadka laga soo saarayo inta lagu celinayo meeqo %.
• In La helo Dastuur Federaal ah oo Garsoorka Dalka mideysan yahay, kala cadahay Heerka DF iyo Heerka Maamul goboleedyada, sida ay ku sameysmayaan, La helo Dastuur ay ku cadahay Dawladda Federaalka oo masuuliyiintoodu ka imaanayaan dalka oo dhan metesho arrimaha Dibadda, Difaaca iyo Amniga gudaha, Dhaqaalaha, Garsoorka, Booliiska local deegaanada Maamul goboleedyada laga qorayo qeyb waa laga dhigi karaa, qeybna Federaal Booliis ayay noqon kartaa.
• Dastuur Federaal ah oo ay ku cadahay sida Maamul goboleedyadu u sameysmayaan, Shuruucda ay ku dhaqmayaan maamul goboleedyadu, Masuuliyadooda, sida ay DF ah ula shaqeynayaan, Xuquuqda lagu leeyahay, xuquuqda DF Somalia ku leeyihiin, Nidaam Garsoor lala tiigsanayo cidii sharciga jabiso. Sameysanka Maamul Goboleedyada Federaalka oo dalku yeelanayo sameyntooda oo ay tahay in laga hor mariyo Dastuurka Federaalka oo ay wax walba ku cad yihiin awoodaha, dhaqaalaha, garsoorka, Doorashooyonka, xuduudaha xubnaha Baarlamaanka, Xuduudaha Maamul goboleedyada.
• In la helo Dastuurkaa Federaalka oo wax walba ku cad yihiin in Beesha Caalamku xoojiyaan in lagu dhaqmo oo dhamaan gobolada ku dhaqmaan. Caalamku ku gacan siiyo hirgelinta dastuurkaa wax walba ku cad yihiin.
Sida Beesha Caalamka iyo DF Soomaaliya Lee yihiin waxaa lagu gaarayaa Doorasho 2016 & Nidaam Federal ah oo Nabad u horseeda Dalka:-
• Dastuurkii Federaalka oo aan la sameyn, la dhmaystirin, lagu muujin Masuuliyadda DF Somalia iyo Masuuliyadda Maamul goboleedyada oo la dhahayo waxaa la sameynayaa MKG ah oo kamid noqda Federaalka Soomaaliya.
• Dawlado la leeyahay waxay kamid noqonayaan Federaalka Soomaliya oo laga hoos sameynayo DF Soomaaliya, Dawladahaas oo looga dayanayo Maamulka Puntland, Dawladahaas waxey leeyihiin Dastuur u gaar ah oo aan la jaan qaadeyn dastuurka qabyada ee Federaalka, Dawladahaa waxay yeelanayaan ciidan u gaar ah, booliis, Milateri, Nabadsugid, Canshuurtooda waa u gaar, Baarlamaan iyo Gole wasiiro u gaar ah ayay yeelanayaa, Dawladahaas nidaam axsaab u gaar ah, Doorashooyin u gaar ah ayey yeelanayaan sida Maamulka Puntland ee looga dayanayo ku qoran, Masuuliyiinta Dawladahaa la leeyahay Federaalka ay ka mid noqonayaan waxaa lagu dhaarinayaa ilaalinta iyo dhaqangelinta Dastuurka Dawlad goboleedka aan la jaan qaadeyn Kan qabyada federaalka.
• Ma jiro qorshe Tirakoob dalka, Hanaan Xisbiyo dalka laga hirgelinayo.
• Dawladaha xubnaha ka noqonaya Federaalka Soomaaliya oo la dhahayo waa la sameynayaa ama Wakiilka UNSOM Nicholas kay iyo Madaxda dawladdu leeyihiin waa sameysan yihiin, Maamuladda ma aqoonsana Dastuurka DF soomaaliya, DF ma metesho hadii ay tahay la macaamilka caalamka, soo saarista kheyraadka, Mana jiraba Dastuur ay ku cadahay awoodaha iyo sida maamulada u wada shaqeynayaan, waxaana tusaale kuugu filan Madaxweynaha Puntland oo sida UNIVERSAL TV laga wada fiirsaday manta sheegay in Dastuurka Puntland oo uu ku dhaartay ay ku qoran tahay ilaalinta midnimada GOBOLADA PUNTLAND OO KA KOOBAN 8 GOBOL, SIDOO KALANA SHEEGAY IN DASTUURKA PUNTLAND OO UU KU DHAARTAY SHEEGAYO IN DOORASHO KA DHACDO PUNTLAND SANADKA 2019-KA. Sida qof kastaahi og tahayna ay ku qoran tahay in Soomaaliya ka kooban tahay 18 gobol, sidoo Kalana NICHOLAS Kay , Madaxweyne Xasan Sheekh, RW Cabdi Weli iyo Madaxda Baarlamaanka u sheegayaan in sanadka 2016-ka Soomaaliya doorasho hal cod hal qof guud ahaan Soomaaliya ka dhacayso, bal is weydii sida beesha Caalamka iyo madaxda Dawlada Federaalka ku hadlayaan iyo sida Madaxda Dawlad Goboleedyada u hadlayaan mida u dhow xaqiiqda? Xaqiiqada ayaa ah sida uu u hadlayo Madaxweynaha Puntland, uusana jirin Dastuur Federaal lagu mideysan yahay, aysana jirin doorasho soomaaliya ka dhacaysa 2016-ka.
• Dawladaha madaxda Dawladda iyo Beesha caalamku samaynayaan wax kala dhaxeeya oo DF Soomaaliya ma jiraan oo aan ka aheyn inay sheegtaan inay yihiin Dawlado kamid ah Federaalka Soomaaliya.
• Dawladaha waxaa loo wajahayaa oo loo sameynayaa qaab beeleed, beelo gaar ah awooda gacanta loo gelinayo awooda Maamuladda, Xuduudaha Dawlad goboleedyadaa waxaa kawada taagan isku heysad, xiisad dagaal, waxaa la isugu wada haystaa qaab qabiil, qaab Maamul sida Somaliland, Puntland, Khaatumo, Central state, Koofur galbeed, Maamulka Juba, Maamulka Hiiraan iyo Sh/dhexe iyo Kan gobolka Banaadir.
• Sameyntii Dastuur dhamaystiran oo dalku yeesho waxaa laga hormarinayaa sameynta Dawlado la leeyahay waxay ka mid noqonayaan Federaalka Soomaaliya oo u dhaqmaya sidii dawlad madax banana marka laga reebo magaca Soomaaliya oo ay marmar sheeganayaan inay kamid yihiin.
• Dawladahaa kamid noqonaya Federaalka oo beesha Caalamku ku dhiirigelinayaan inay u dhaqmaan sidii dawlado la siman DF Soomaaliya, Nicholas Kay, Safiirada Midawga Yurub, Kuwa IGAD waxay ula macaamilayaan sidii dawlado lasiman DF Soomaaliya, Deeqaha Caalamka lama soo marsiinayo DF Soomaaliya, Dawlad goboleedyada si toos ah ayaa loola xiriirayaa.
• Dawladaha kamid noqonaya Federaalka Soomaaliya sida Nicholas Kay iyo Madaxda DF Soomaaliya waxaa loo samaynayaa ciidan hadii aad u fiirsato kaba awood badan kan dawladda Dhexe, tusaale waxaa ku filan ciidamada Imaaraadka carabta UAE u tababaray, qalabeeyay maamulka Puntland, iyo sida hadda loogu tababarayo qalabaynayo ciidanka Maamulka KMG ah Juba.
Isku soo wada duube waxaa dalka Soomaaliya ka socda oo ay horboodayaan wakiilka UNSOM Somalia Nicholas Kay, Wakiilka EU Somalia, Midawga Africa AU, IGAD iyo Madaxda Dawladda Federaalka Soomaaliya ee ay kamidka yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh, RW Cabdi Weli, Gudoomiyaha Baarlamaanka Prof Jawaari iyo ku xigeenadiisa ee ay iyaga oo mideysan u sheegayaan Shacabka Soomaaliyeed oo hurdada dheer ku jira, qaarkood isku naceen qaab qabiil ayaa lagu tilmaami karaa BEENTA QARNIGA & MARIN HABAABINTII ugu xumeyd ee lagu sameynayo Qaranimada Soomaaliya.
Beesha Caalamka ayay u diyaarsan tahay marka lagaaro 2016-ka inay dhahdo doorasho waxaa loo gaari waayey khilaafka Madaxda Dawladda iyo Khilaafka Dawlad goboleedyada lugta iyo luqunta looga xirayo helitaanka Dawlad Soomaaliya leedahay eel amid noqota dawladaha Caalamka.
Gudoomiye Jawaari oo deg deg uga hadlay Khilaafka Xasan Sheekh iyo C/weli
Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa wuxuu si kooban kaga hadlay khilaafka soo kala dhex galay Madaxweynaha Dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo Ra’iisal Wasaaraha Xukuumada Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Gudoomiyaha oo maanta Saxaafada kula hadlay Magaalada Muqdisho, ayaa wuxuu Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaruhuba ugu baaqa inay xaalada qaboojiyaan, isla-markaana ay xaliyaan waxyaabaha ay isku hayaan.
Isagoo hadalkiisa sii wata, ayaa wuxuu shacabka Somaliyeed iyo bulshada caalamkuba uu ugu baaqay inay is dejiyaan, isla-markaana ay ku kalsoonadaan Hay’adaha Dastuuriga ah, ee ay maanta Soomaaliya lee dahay.
“Waxaan beesha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay is dejiyaan, oo ay ku kalsoonaadaan Hay’adaha Dastuuriga ah ee dhisan.” ayuu yiri Gudoomiyaha Baarlamaanka Federalka Somaliya.
Wuxuu intaa raaciyay Maxamed Sheekh Cismaan “Dowladdu waxa ay awood u lee dahay in arrimaheeda gaarka ah ay ku xaliso gudaha dalka.”
Jawaar wuxuu muujiyay sida uu kaga xun yahay khilaafka xilligaan ka dhex oogan Madaxweynihii Somaliya iyo Ra’iisal Wasaarihii Xukuumada, xilli khilaafkoodu uu soo shaac baxay habeenkii xalay ahaa.
Jawaari iyo wefdi uu horkacaayo, ayaa waxay maanta u amba baxeen Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay, iyadoona goor dhow lagu soo dhaweeyay Garoonka Baydhabo, waxaana Isniinta berrito ah lagu wadaa in uu soo gaba gabeeyo shirkii Maamul U Samaynta Gobolada Koonfur Galbeed, ee ka soconaayay Baydhabo.
C/wali Gaas “Dadka kasoo horjeeda heshiiska Puntland iyo dowladda dano gaar ah ayeey leeyihiin”
Madaxweynaha Maamulka Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas ayaa ku tilmaamay dadka kasoo horjeeda heshiiskii dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Puntland ay kala saxiixdeen kuwa leh dan shaqsiyadeed.
Xog-horudhac ah: Masharaxiinta xilka madaxtinimada ee 2016+ Magacyada
Doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee 2016, waxaa weli naga xiga waqti badan iyo geeri, hase yeeshee waxaa soo baxaya warar horudhac ah oo ku saabsan shaqsiyaadka laga yaabo inay is-sharxaan.
Diblumaasi lagu magacaabo Axmed Guuleed, oo Muqdisho ku sugan ayaa Caasimada Online u sheegay in hadal heynta Musharaxiinta u tartameysa qabashada madaxtinimada dalka ee dhaceysa 2016-ka laga dhex dareemayo masraxyada siyaasadda.
3-Cabdi-Qaasim Salaad Xassan
5-Xasan Maxamed Xuseen ”Mungaab”
6-Cali Maxamed Geedi
7- Maxamed Cali Ameeriko
8-Cabdi Weli Sheekh Axmed
Sidoo kale, waxaa jiro Musharaxiin kale oo aan weli caddeyn mowqifkooda, waase ay caddahay in musharaxiinta ay intaas ka badan doonaan.
Ururrada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya iyo hoggaamiye diineedka ayaa iska kaashanaya in ay bilaabaan olole wacyi-galin ah oo looga golleeyahay in lagula dagaallamo aydiyoolajiyadda xagjirnimada ee goobaha laga xoreeyay al-Shabaab.
Jabhad u mideeysan baddalidda fikirka xagjirnimo“Dawladdu waxay la timid awooddii, gaar ahaan Howlgalka Badweynta Hindiya, ee al-Shabaab looga saaray dalka,” ayuu yiri Cumar. “Urur ahaan waxan doonaynaa in aan [la nimaanno awooddii] loo baabi’in lahaa fikirkii xagjirnimada ahaa ee ay ka tagtay al-Shabaab.”
Hoggaamiyayaasha diinta, haweenka iyo dhallinyarada oo cayaaraya kaalin muhiim ahYool kale oo muhiim ah oo laga leeyahay olalahan waa in laga caawiyo muwaadiniinta ku go’doomay meelihii ay hore ugu xoogganaan jirtay al-Shabaab in ay dib ugu soo xirmaan qaybaha kale ee dalka iyada oo la dhiirri-galinayo wadahadalka dhex maraya gobollada, ayuu sheegay Cumar.
“Waxa ay kaalinteena tahay sidii dhalinyarada looga wacyi-galin lahaa afkaarta khaldan ee xagjirnimada, gaar ahaan kuwa wali aaminsan fikirka xagjirnimada ee ku jira al-Shabaab, annaga oo adeegsaneeyna kulamo wacyigalin ah oo ballaran,” ayuu yiri, isaga oo intaa raaciyay in olalaha cusub ee wacyi-galintu uu doonayo in uu isku xiro dhammaan dhallinyarada Soomaaliya.
Danjire Affeey oo wado qorshe dadka Kismaayo lagu siinayo Kibandho (Xog)
Warar gaar ah oo ay heshay Jornalizem, ayaa sheegaya in Danjire Maxamed Cabdi Afey uu gacmaha kula jiro shirqoolo uu u maleegaayo Dowlada Federaalka ah ee Somalia.
Wararku waxa ay tibxayaan in Danjire Afey uu IGAD, QM ka dhaadhacsiinaayo in ilaa iyo xad Maamulka KMG ee Jubba loo madax-baneeyo dhoofinta dhuxusha, helida hub iyo in Kismaayo laga hirgaliyo bixinta ID-karada dhalashada Kenya (Kibaandho), maadama weli Kismaayo ay ka buuxaan Maleeshiyada Alshabaab.
Danjire Afey ayaa aaminsan in Al-Shabaab Kismaayo looga sifeyn karo in Bulshada Degta Jubbooyinka la siiyo dhalashada Kenya, sidaana loo kala saaro Al-Shabaab iyo shacabka maadama dhalashada Somalia laga sameysan karo meel waliba oo aan leysku haleyn Karin, sida uu ku dooday.
Wararku waxa ay intaa kusii darayaan in Danjire Afey uu Kenya u qoray warqado codsi ah oo uu ku miijinaayo suuragalnimada in Kenya ay xalin karto Jubbooyinka, waxaana la sheegayaa in warqadaasi uu ku qeexay in arrinta aan loo gudbin DF iyo Ururada ka qeybqaata Ammaanka iyo horumarka Somalia.
Dad ku sugan Kismaayo, oo qorshahan ka war-helay ayaa Alldhacdo u sheegay in la doonayo in kaararka la siiyo dadka ku beesha ah Axmed Madoobe, si qowmiyadaha kale looga sifeeyo Kismaayo.
Maxamed Cabdi Afey ayaa waxa uu si xooli ah u wadaa in Fakirkaasi laga dhaadhiciyo QM, waxa uuna Afey xiligaani isku xire u yahay Axmed Madoobe iyo Dowlada Kenya si loo suuragaliyo in maamulka Jubba si hadda ka ballaaran loo hoos geeyo dalka Kenya.
Daawo: Magaca iyo asal ahaan dalka uu ka soo jeedo Ninkii weeraray Baarlamaanka Canada oo la helay
Daawo: Gabayga laga sameeyay Taliyaha Ciidanka Xooga oo ay dad badan la qiiroodeen
Gabayga Fariin Qaran oo laga sameeyay Taliyaha Ciidanka Xooga Dalka General Daahir Aadan Cilmi (Indha-qarshe), ayaa wuxuu noqday mid saamayn reebay, iyadoo ay soo badanayaan dadka dhageysanaaya.
Gabaygaan, ayaa waxaa sameeyay General Cismaan Cilmi Guure oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xooga Dalka, wuxuuna Gabaygu tiriyay markii uu ka carooday masuq maasuq baahsan, oo uu Ciidanka Qalabka Sida ka dhex wado Daahir Aadan Cilmi.
General Indha-qarshe oo amray in la soo xiro General Cismaan Cilmi Guure, ayaa waxaa Isniintii lagu soo xiray Xabsiga Dhexe ee Xamar, iyadoona wax leeska weydinaayo waxa uu ku soo xiray Sarkaalkaasi, haddii uu xaqiiqda jirtaa ka dhawaajiyay.
Ilo lagu kalsoonaan karo, ayaa Dhacdo.com u sheegay in Wasiiro ka tirsan Xukuumada Somaliya ay barraha Internet-yada ka dhageysteen Gabayga Fariin Qaranka, isla-markaana ay aad ula tacajabeen.
Wasiirada, ayaa waxay qabaan inay khalad tahay xariga General Guure, waxayna qorsheynayaan inay arrintaasi kala hadlaan Madaxweynaha iyo Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, si dib xoriyadiisa loogu siiyo Sarkaalkaasi.
Sidoo kale qaybaha bulshada, ayaa hadalheysa Gabayga Fariin Qaran, waxaadna arkeysaa iyagoo maqal iyo qoraal ahaanba u soo dhigaaya barraha ay bulshadu ku wada xiriirto.
Gabayga Fariin Qaran, ayaa saamayntaan yeeshay, ka gadaal markii la soo xiray General Guure, iyadoo markii hore uu ku ekaa hal Idaacad oo kaliya oo laga baahiyay, waxaadna xilligaan si weyn ugu arkeysaa khadka Internet-yada.
Galmudug iyo Puntland oo xiisad ay ka dhex oogan tahay kaddib isku dhac…
Wararka ka imanaaya deegaanka Bandiiradley ee Gobolka Mudug, ayaa waxay sheegayaan in xiisad u dhaxeyso Maamulada Galmudug iyo Puntland ay ka jirto, ka dib isku dhac u dhaxeeyo oo ka dhacay deegaankaasi.
Ciidamada labada dhinac, ayaa waxay Khamiistii isku fara saareen deegaanka Bandiiradley, iyadoo Maamulka Puntland lagu eedeeyay in uu weerarkaasi ka dambeeyay, halka Ciidamada Galmudugna ay iska caabiyeen.
Gudoomiyaha deegaanka Bandiiradley ee Maamulka Galmudug C/risaaq Axmed Jaamac, ayaa sheegay in loogu yimid dhulkii ay ku sugnaayeen, isagoona Madaxweynaha Maamulka Puntland Dr. C/weli Maxamed Cali Gaas ku eedeeyay in uu dusha ka riixaayo duulaankaasi.
Gudoomiyaha waxa uu intaa ku daray in Madaxweynaha Puntland ay ka dhaadhacsan tahay in dhulkaasi ay lee yihiin dadka reer Puntland, isla-markaana uu ugu baaqaayo inay ka saaraan dadka reer Galmudug.
C/risaaq Axmed Jaamac, ayaa ka dhawaajiyay in hub uruursi uu ka soconaayo Bandiiradley, isla-markaana ay isku muuqdaan labada dhinac, xilli kastana ay suurta gal tahay inay wada dagaalamaan.
Isagoo la hadlaayay Idaacada Kulmiye ee Magaalada Muqdisho, ayuu sheegay in xiisada ka taagan Bandiiradley ay soo cusboonaatay, markii Ra’iisal Wasaaraha Somaliya Dr. C/weli Sheekh Axmed Maxamed, uu heshiis la saxiixday Puntland.
Gudoomiyaha Bandiiradley, ayaa wuxuu Maamulka Puntland ugu baaqay inuu ka fiirsado in la wada dagaalamo, isla-markaana uu ka doorbido nabadda in lagu wada noollaado, sida uu yiri.
Beesha Mudullood oo sheegtay inay 5 arrin walaac ka qabto, dalbatayna 5
p>Bayaan: Mustaqbalka Mogadishu ee 2016
Annaga oo ku hadlayna magaca Beesha Mudulood oo ka kooban, Haweenka, Dhallinyarada, Ardayda, Ganacsatada, ururrada arrimaha bulshada iyo hoggaamiyaasha dhaqanka iyo waliba culuma’udiinka waxaan soo dhaweeynayna geedi-socodka iyo horumarka ay Dowladda ka gaartay dib u soo-nooleynta hannaanka dowladnino iyo dhameynta colaadaha sokeeye ee dhiiga badan ku daatay iyo caddaalad xumadi soo socotay mudadii dheerayd ee dhowr iyo labaatanki sanno ee la soo dhaafay.
Inkasto geedi-socodkan uu la soo kulmay walina ay horyaalaan caqabado fara badan, waxaan u aragnaa mid horey u socda oo waliba joogto ah. Waxaan aaminsanahay in aan ku hadleyno codka dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan markii aan dhahno hadafkeena ugu weyn waa in la helaa nabad iyo xasilooni WAARTA iyo waliba dimoqaraadiyad wanaagsan. Waxaana ku hanweynahay in midda ugu danbeysa oo ah dimoqaraadiyadda ay ka dhacdo Soomaaliya gudaheeda ka dib in ku dhow rubuc qarni.
Waxaan aad uu fahansannahay muhiimada ay leedaay in la meelmariyo lana soo af-jaro xaalada siyaasadeed ee uu xiligan waddanka ku suganyahay laguna soo gunaannado doorashooyin xor ah (hal qof hal cod) iyado laga fogaanayo wax kasta oo keeni kara xaalad kacsan iyo degenasho la’aan. Sidaa daraadeed, waxaan rabnaa in aan halkan ku muujino welwelka weyn ee aan ka qabno arrimaha hoos ku xusan:
1. Geedi socodka arimaha Federaalka oo la marin habaabiyay!
Sida ay hadda wax u socdan, waxaa cad in qorshaha Federalka ee Dowladda wado ee qeyb weyn ku leedahay Beesha Caalamka. Waxaan ka welwelsannahay habka loo dhaqan gelinayo Federaalka iyo asagoo no muuqda mid lagu deg-degay. waana mid aan hindisadaheeda laga so billaabin shacabka, oo laga wado kor, ama mid ee madaxda iyo siyaasiinta keliya wadaan, mana aha mid haysta taageerada inta badan bulshada Soomaaliyeed. Midda kale, sida ay hadda wax u socdaan waxaan is leenahay waxaa taageersan oo hirgilintiisa ku dadaalaya oo kaliya inyar oo leh dano gaar ah (mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale).
Geedi socodka dhisida hanaan Dowladeed oo ku saleysan habka Federaalka waa in uu ka soo bilowdaa hoos lagana qeyb geliyaa dhammaan bulshada qeybaheeda kala duwan sida bulshada deegaanada loo sameynayo nidaamka iyo ururada ka shaqeeya arrimaha bulshada. Sidaa daraadeed, waa in ay beesha caalamku taageertaa hab ku saleysan wada jir, wada hadal iyo dib u heshisiin. Taa caksigeeda, ma ahan in geedi socodka dhisitaanka nidaamka Federaaliga u noqdo mid kor laga keenay, mana ahan in lagu deg dego dhaqan gelintiisa iyadoo la adeegsanayo quwado shisheeye.
2. Doorasho Madax bannaan
Dadaalada la wado waa in ay ku jiheysnaadaan in degaannada Soomaaliyeed lagu qabto doorashooyin xor ah iyadoo laga siinaayo deegaan kasta kuraasta Barlaamanka cadadka uu xaq uu leeyahay. Balse, inta aan taas la gaarin waa in la helaa tirokoob leysku raacsanyahay ee ku aadan tirada dadka ku nool deegaanada ay doorashadu ka dheceyso si loo xaqiijiyo tirada kaga soo aadeyso fadhiyada Barlamaanka. Waana sida kor ku xusan si xalaal ah oona fudud in lagu gaaro nidaam Federaal ah oo shaqeyna kara intii la abuuri lahaa dhibaatooyin iyo isku dhacyo hor leh oo wiiqa dadaalka dib loogu soo celinaayo Dowladnimadii Soomaaliyeed.
3. Aayaha Moqdisho
Si loogu qeexo qaab dhismeedka Federaalka dhexsdiisa aayaha magaalda Muqdisho, waa in xukuumada Federaalka ay ka gudubtaa balan qaadyada iyo ku cel celinta maran ee ay aqoonsataa in bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ama gobolka Benaadir ay leeyihiin xuquuqo cad cad oo ay ugu weyntahay in ay aayahooda go’aansan karaan. Waa in ay xukuumada ka jawaabta baaqyada ku aadan in Muqdisho/Benaadir ay ka mid noqoto gobolada loo sameynayo maamul ku saleysan nidaamka Federaaliga ah, waana in aan leyska dhego tirin baaqyadan oo la hergeliyaa sida ugu dhaqsiyaha badan iyadoo laga tusaale qaadanaayo geedi socodka hadda ka socdo Soomaaliya oo dhan, kaasoo lagu unkayo maamullo Federaali ah.
Tani waxey suurto gelineysaa in la ilaaliyo taariikhda iyo siyaasadda soo jireenka ah ee ay Muqdisho/Benaadir leedahay. Waxaana ka soo horjeesaneynaa iskuu day kasto oo ka hor imaanaya ama xadidaya ama xaqiraya xuquuqda deegaaneed, mid siyaasadeed iyo mida dhaqaale ee ay leedahay magaalada Muqdisho. Isku dayada hadda socdo ee aan ka soo horjeedno waxaa ka mid ah, in gobolka Benaadir gebi-ahaantiisa laga dhigo loona tix geliyo caasimad ahaan hoos imaanaya Dowlada dhexe een Federaalka. Waxaan aaminsannahay haddii la qaato nidaamkan in la dhaqan gelinaayo siyaasad qaawan oo qabyaalad salka ku haysa iyo in la isku dayaayo in la daboolo xuquuqda dad iyo deegaaneed midda siyaasadeed iyo muhiimada dhaqaale ee ay Muqdisho u leedahay dadka dagan.
4. Dowlad goboleedyada ku saleysan nidaamka Federaaliga ah
Ugudanbeyn, waxan halkan ka muujineynaa welwelka aan ka qabno dhisida dhawaan la damacsanyahay in lagu dhiso maamul goboleed laysku daraayo Gobolada Shabeelada dhexe iyo Hiiraan. Sababta oo ah, habkan ma ahan mid dadka u cad iyadoo dadka badankii ay ku kala ra’yi duwan yihiin in laysku daro labo gobol oo aan laheyn xiriir taariikhi ah oo fog marka loo barbar dhigo xariirka dhaqameed iyo midda dhaqaale ee ay Shabeelada Dhexe la leedahay Gobolka Shabeelada hoose oo kale. Sidaa daraadeed, waxaan u soo jeedineynaa Dowlada iyo beesha caalamkaba aaney ku deg degin oo aaney kala qeybin deegaanada Soomaaliyeed iyagoo eegaya oo kaliya wixii ula muuqda in ay israaci karaan Qariidad ahaan ama ay u arkaan in ay macquul tahay marka ay kor taagan yihiin miiska naqshadeynta iyagoo aan tixgelineynin xiriirka taarikheed iyo midda siyaaso-dhaqaale ee ka dhexeya deegaanda dalka.
Xaaalada ammaan ee ka jirta Soomaaliya waa mid laciif ah walina waxaa jira xaalado amni daro meelaha qaar gaar ahaan magaalo madaxda Muqdisho. Sidoo kale, meelaha dhawaan Dowladda gacanteeda soo galay dadka ku dhaqan waxey la kulmaan cabsi iyo khatar xagga ammaanka ah. Waxaan ka codsaneynaa hay’adaha ammaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya in ay sugaan nabadgelyada dadka suurtogeliyaana in dadka ku dhaqan degaanadan ay qeyb ka qaataan sugida iyo jiritaanka nabadgelyada. Tani macnaheedu waa in ay hay’adaha nabadgelyada ku shaqada leh ay ku dadaalaan sidii ay wada shaqeyn u dhex mari laheyd Dowladda iyo dadka Soomaaliyeed iyagoo xaqiiijinaya in ay la xisaabtamaan cid kastaa oo khal-khal gelineysa ammaanka si loo soo celiyo kalsoonidi ay shacabka ku qabeen xukuumaddooda.
Waxaan kaloo rabnaa in aan fursadan uga faa’iideysano in aan si weyn u dhaleeceyno dhammaan kuwa ka tirsan xoogaga ammaanka iyo ciidamada AMISOM ee u geysanaya kufsiga iyo xad gudubyada haweenka iyo gabdhaha Soomaaliyeed. Arrimahan waa kuwo aan loo dulqaadan Karin. Waxaana ugu baaqeynaa Xukuumada Federaalka Soomaaliya iyo waliba beesha caalamka in ay mudnaan gaar ah siiyaan arinkan ayna qaataan talaabooyinka ku habboon sidii loo joojin lahaa falalkan foosha xun.
Gabbagabada iyo gunaanadka
Baaqenaan waa mid ku salaysan in umadda Soomaaliyeed guud ahaan hesho dowlad cadaalad ah iyo nidaam loo siman yahay oo ka kooban: 1) in la xaqiijiyo geedi-socodka lagu hirgelinayo nidaamka Federaalka in uu ku saleysanaado xaqiiqda dhabta ah iyo in uu ahaadaa mid ay qeyb weyn ku yeeshaan dadka Soomaaliyeed uusan noqon mid kor laga keenay, 2) in la gaaro doorasho xur ah iyadoo la sameynayo tiro koob rasmi ah si loo xaqiijiyo awood qeybsi xalaal ah, 3) in si cad loo kala saaro Villa Soomaaliya (oo loo tixgelinayo xarun ay maamusho Dowladda Federaalka) iyo gobolka Benaadir intiisa kale si loo xaqiijiyo in dadka degan gobolkan ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helayaan dadka kale ayna u helaan qeybta kaga aadan geedi-socodka dhisida nidaamka federaaliga ah, 4) Dowlad goboleedyada la unkaayo waa in ay ku saleysnaadaan taariikhda soo jireenka ah ee ka dhexeysa dastuurkana uu aas-aas u ahaadaa, 5) waa in la xoojiyaa xaalada ammaan iyadoo la kaashanaayo dhammaan bulshada Soomaaliyeed.
Dhammaan intan aan kor ku soo xusnay waa in lagu gaaraa wada tashi iyo is-xaq dowr iyo waliba kalsoonida shacabka. Nidaamka Federaalka waa in loo unkaa hab keeni kara nabadgalyo iyo xasilooni waarta si loo xaqiijiyo loona soo celiyo rajooyinka, riyooyinka iyo hammiga dhammaan dadka Soomaaliyeed.
Gudoomiye Jawaari”Ciidamo Sierra leone ah Dalka ma imaan karaan”
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari ayaa sheegay in Ciidamo ka socda Dowladda sierra leone aysan imaan karin Dalka Soomaaliya Sababo la Xariira Cabsida laga qabo Cudurka Ebola oo Galbeedka Afrika Faro ba’an ku haya.
Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa sheegay in Dalka sierra leone laga helay Caabuqa Ebola islamarkaana Dowladda Soomaaliya ayadoo dalkeeda u naxaysa ay go’aan satay in Ciidamada sierra leone ee qeybta ka ah AMISOM aysan dalka imaan karin oo la hakiyo inta arrintaan ay meel u dhaceeyo.
“Warqad ayaan u qornay Dowladda sierra leone oo aan uga dalbaneyno in Amarkeena la tixgalyo,xitaa Saraakiil Kormeer uga imaaneysa sierra leone oo Soomaaliya imaan karta ma jiraan.
Hadalka Kusimaha Madaxweynaha ahna Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ayaa imaanaya xili Dad ka badan 4500 (Afar kun iyo Shan Boqol) oo ruux Cudurka Ebola ay ugu geeriyoodeen Dalal ku yaala Galbeedka Afrika,iyadoona Dalka sierra leone oo Ciidamo ay ka joogaan Soomaaliya laga helay Caabuqa Ebola.
Reer Afgooye oo war cusub loo sheegay
Masuuliyiinta maamulka degmada afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa ka dalbaday shacabka ku dhaqan degmadaasi inay si wanaagsan ula shaqeeyaan hayadaha dhaqaalaha ee maamulka degmada.
Mustaf Sheikh Cabdi Waaxid Gudoomiye xigeenka dhaqaalaha degmada Afgooye ayaa sheegay in magaalada ay ku qabteen tababar ku saabsan qaadista canshuuraadka, laakiin dadweynaha haddii aysan la shaqeysan aysan waxba sameyn karin kaligood.
Wuxuu sidoo kale sheegay in degmada amaankeeda uu wanaagsan yahay, laakiin shacabka degmada ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan laamaha amaanka iyo qeybta arurinta canshuuraadka.
Maanta ayaa lagu wadaa degmada Afgooye in lagu soo gabogabeeyo tababar muddo seddex maalin ka socday degmada oo lagu baranayay qaabka canshuurta loo qaado, sida uu sheegay Mustaf Sheikh Cabdi.
Xildhibaan Jeesoow oo fariin aan laga fileyn u diray Shacabka Soomaaliya
Xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo kamid ah gudiga amniga baarlamaanka Soomaaliya ayaa amaanay dadaalka ay sameynayaan hayadaha amaanka ee dowlada Soomaaliya.
Xildhibaanka ayaa sheegay in dadaalka hayadaha amaanka ay wanaagsan tahay in shacabka Soomaaliyeed ay ku taageeraan, si horumar dhanka amaanka loo gaaro, sida uu xildhibaanka sheegay.
Daahir Amiin Jeesow, ayaa sidoo kale sheegay ineysan jirin dowlad shaqeyn karta taageerada shacabkeeda, ayna isku xeran yihiin amniga iyo taageerada hayada amaanka.
Hadalka Xildhibaanka ayaa kusoo beegmay maalmo kahor markii qaraxyo dad badan ay ku dhinteen ay ka dhaceen magaalada Muqdisho, iyadoo hayadaha amaankana ay sheegeen inay dadaalo dheeraad ah sameyn doonaan.
Xildhibaano dhexda u xiranaaya xiisadda Deefoow
Iyadoo dowlada Soomaaliya ay gudi u xilsaartay dhameynta dagaal beeleedyada ka dhacaya deegaanka deefow ee duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa haddana dadka halkaasi kasoo jeeda waxay sheegeen inay door ka ciyaarayaan arintaasi.
Xildhibaan hore Ibraahim Cabdulle Nuur ayaa sheegay in gobolka Hiiraan uu yahay gobolkii ay kusoo barbaareen ayna gacan weyn ka geysan doonaan dadaalada nabadeed.
Wuxuu kaloo sheegay in odayaal ay wadaan dadaalada dhameynta colaada, sidoo kalana magaalada Muqdisho ay ka tagi doonaan waxgarad ka qeyb qaadanaya sidii xal buuxa loo gaari lahaa.
Deegaanka Deefow ayaa marar badan waxaa kusoo laalaabtay dagaal beeleyada, waxayna sababtay in dad banaanbaxyo ay ka sameeyaan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
TOP NEWS:- Axmed Madoobe oo Gaadiid badan laga qabsaday﻿
Deeganka Luglow oo Magaalada Kismaayo u jira 13 km ayaa dagaal qaatay in kabadan 6 sacadood waxa uu ku dhex maray kooxda Axmed Madoobe ee Raaskambooni iyo maleeshiyada Al-Shabaab.
Warar soo gaaray Jornalizem ayaa sheegaya in in maleshiyaadka Raskambooni ay dagaalkaasi uga dhinteen Askar garaysa 45 halka dhawac badan u jiro. Sidoo kale Maleshiyaadka Raskambooni ayaa waxaa laga furtay 4 gadiidka dagaalka.
Khasaaraha gaaray kooxda Al-Shabaab ayaa la rumeysan yahay in uu badan yahay, balse wax xog ah lagama hayo.
Deeganka Luglow ee uu dagaalkaan ka dhacay ayaa waxaa uu u dhexeya Deeganka Bullogaduud ee ay Ciidamada Kenya dhawaan qabsadeen iyo Dagmada Kismaayo Luglow waxaay Kismaayo u jirta 13 KM, halka Bullogaduud na ay u jirto 17 km.
Marka aad qiimayso goobaha u dagaalku ka socdo iyo goobaha ay Ciidamada Kenya horay u qabsaden ayaa waxaa ku soo baxaya in Ciidamada Amisom iyo Maleshiyaadka Raskambooni ay ku jiraan go’doon.
Wararka qaar ayaa sheegaya in maleeshiyada Shabaabka ay soo riixeen Raaskambooni iyo Kenya, ayna usoo siqeen dhinaca Kismaayo.